बिवाह गुण मिलान | बर बधु गुण मिलान सुखी एवम सफल बैवाहिक जिवन का लागी – Complete Nepali News Portal
बिवाह गुण मिलान | बर बधु गुण मिलान सुखी एवम सफल बैवाहिक जिवन का लागी
विवाह दुई शरिरको मात्र नभई दुई आत्माको पनि मिलन हो। हरेक युवा युवतीको बिवाह पछि आफ्नो जिवनसाथी सँग एक–अर्कामा विश्वास, भावनाको कदर, आपसी काम एवं व्यक्तिगत चाहनाको सम्मान गर्दै अघि बढ्न पाइयोस भन्ने चाहना हुन्छ । आत्मिक समझदारी बन्न सकेमा प्रेम वा मागी दुवै विवाह स्थायी र सफल हुन्छन्। दुवै विवाह टिक्न सक्छन ।विवाह मनसँग जोडिने हुँदा मनको चञ्चलता र स्थिरताले विवाहको प्रभाव र सामथ्र्य निर्माण हुन्छ।
पछिल्लो केहि समय यता विवाह लामो समयसम्म टिकाउनु निकै मुस्किल जस्तै भइसकेको छ । पति र पत्नीबीचको सम्बन्धपनि देखावटी रुपमा मात्र राम्रो देखिन्छ । भावनात्मक रुपमा त्यति धेरै गहिरो हुँदैन ।
यदि बैवाहिक सम्बन्ध राम्रो छ भने जीवन स्वर्ग बन्छ । तर यहि कुरा विग्रीयो भने जीवन नर्क बन्छ । त्यसैले जो कोहिको पनि यो जान्न जरुरी छ कि हाम्रो जीवनसाथी कस्तो हुन्छ ? र उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ ? ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार सुख र खुशी रोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह दशा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ ।
बिवाह गर्न योग्य युवा र युवतीको बिवाह अगाडी जन्म कुण्डली वा चिना बाट गुँण मिलान गर्नु परम्परा निर्वाह गर्नू मात्र होईन । बर बधुको गुण मिलान बाट उनीहरुको स्वभाव, गुँण, आत्मीय प्रेम एवं एकआपसमा हुने व्यावहार बारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सन्तान सुख लगायत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बर बधुको जन्मकुण्डली बाट पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
सुखी एवं सफल बैवाहिक जिवनका लागि बरबधुको गुँण मिलान गर्ने बैज्ञानिक पद्धती वरदान सावित भएको छ । जिवनसाथी बाट कत्तिको माया, विश्वास अनि एक–अर्काको भावनाप्रति सम्मान पाईन्छ वा पाईदैन भनेर पूर्व जानकारी लिन सकिन्छ ।
यदि तपाई कसै सँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र उ सँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? भन्ने जानकरी लिन चाहानुहुन्छ वा मागी विवाह गर्ने योजनमा हुनुहुन्छ भने एक पटक अवश्य आफ्नो र साथीको जन्मकुण्डली बाट ग्रहको अवस्था बिष्लेषण र गुँण मिलान गराउनु उत्तम हुनेछ ।
यदि तपाई हामी मार्फत गुँण मिलान गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी लाई सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । अनुभवी एवं विज्ञ ज्योतीषी हरु सँग आफै प्रत्यक्ष कुरा गरी प्रेम तथा बिवाह जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा पुर्व जानकारी लिन सक्नु हुनेछ ।
पुष्करलालको ‘यात्रा विदेशको चिन्ता स्वदेशको’ सार्वजनिक – प्रेस विज्ञप्ति